Orinasa namboarina tamin'ny vy vy namboarina manokana sy mpamatsy | Ouzhan
Ny fizotran'ny metaly dia misy vy. Ampiasaina matetika ny welding vy sy ny lasantsy gazy, ary koa ny welding laser, ny famonoana vy, ny fantsom-panafanana, ny fantson-kazo elektronika, ny fantsom-pipoahana, sns.
Taratasy fanamafisam-peo vita amin'ny vy vita amin'ny kofehy vita amin'ny vy;
Mipetraka na aiza na aiza isika. Ny metaly metaly dia tsy azo sarahina amin'ireo faritra metaly amin'ny alàlan'ny fanodikodinam-pahefana, ny fanapahana laser, ny fanodinana mavesatra, ny fifamatorana vy, ny fanaovana sary metaly, ny fanapahana ny plastika, ny fanamafisam-peo, ny famolavolana, ny fanondrahana metaly, ny famonoana, ny fanapahana ny rano welding. Ny metaly takelaka dia faritana toy ny: ny metaly takelaka dia dingana miasa mangatsiaka feno ho an'ny ravina vy (matetika ambanin'ny 6mm), ao anatin'izany ny fanetezana, ny famelezana / ny fanapahana / ny fitambarana, ny fametahana, ny famafazana, ny riveting, ny fizarana ary ny fananganana (toy ny vatan'ny fiara). Ny mampiavaka azy dia ny hatevin'ny akanjo itovizany. Ny vokatra metaly takelaka dia manana ny mampiavaka ny lanjan'ny maivana, ny tanjaka avo, ny fitondra herinaratra, ny vidiny ambany ary ny fahombiazan'ny famokarana betsaka. Manana fampiasa betsaka izy ireo. Ny fanodinana vy vita amin'ny takelaka dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny elektronika, ny fifandraisana, ny indostrian'ny fiara ary ny fitaovana fitsaboana. Ohatra, amin'ny tranga solosaina, telefaona finday, ary MP3, ampahany lehibe ny metal sheet. Ho fanampin'izany, ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana ara-pitsaboana izy io, ary ampiasaina amin'ny vatan'ny fiara sy kamio (kamio), fiaramanidina fiaramanidina sy elatra, latabatra fitsaboana, tafo fananganana (fanamboarana) ary fampiharana maro hafa.
Tombontsoa amin'ny faritra fanamoriana vy any Shanghai Ouzhan
- Izy io dia afaka mahatsapa ny fitambarana milina fanamafisana milina marobe, ary ny fampidinana azy ho azy sy ny famoahana azy ary ny fikolokoloana ny workpiece misy fahalalahana marobe dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny fizotry ny famokarana sarotra;
- Izy io dia azo ampiarahina amin'ny fizahana maso maso amin'ny indostrialy CCD hahitana ny fahazoana maimaimpoana ireo sanganasa sarotra;
- Izy io dia afaka mahatsapa ny famokarana marobe mitohy amin'ny sangan'asa iray, ary afaka mahatsapa ny famokarana fiovam-po mandeha ho azy ny karazana maro sy ny batch kely;
- Fanitsiana avo lenta, hahatratrarana ny fifandraisana amin'ny fitaovana hafa toy ny fitaovana milina CNC, PLC, sensor ivelany, ary hahazoana fanaraha-maso azo antoka sy azo antoka amin'ny alàlan'ny programa;
- Fahavoazana: fanoherana avo lenta ny fiasa, fanaraha-maso ny vokatra, axis ivelany, palletizing ary asa hafa tsy voatery hataonao;
- Ny tsipika famokarana mandeha ho azy an-tserasera sy ny firafitry ny orinasa "nomerika" dia azo tsapain-tanana, hamonjy ny mpiasa ary hanatsara ny sary ara-teknikan'ny famokarana orinasa.
Namboarina manokana vy vy vy faritra welding
Dingana lehibe Fanodinana vy vy
Previous: Ny vy vy vy welding
Manaraka: Faritra vita amin'ny varahina CNC